ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com "ပထွေး"
Posted by Admin on September 07, 2018
ပထွေးဖြစ်သူ ဦးအုန်းကျော်၏ အလိုးခံခဲ့ရပုံများကို ပြန်လည် မြင်ယောင်မိလာလေတော့သည်..။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက သင်းသင်းအမေက ရွာမှာ အလှူလုပ်လိုသည်ဆိုသဖြင့် အိမ်ကို ပြန်သွားခဲ့သည်..။ အလှူကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လုပ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အမေက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားပြီး စီမံ ခန့်ခွဲနေရသည်..။ သင်းသင်း အိမ်ကိုရောက်သွားတော့ မနက်ပိုင်း ဖြစ်သည်..။
ရေမိုးချိုး ၊ ထမင်းစားပြီးတော့ ခရီးပန်းလာသဖြင့် မိမိ အိပ်ခန်းထဲဝင်ပြီး ခဏလှဲနေလိုက်သည်..။ ခရီးပန်းလာတာရော ၊ ထမင်းစားပြီးခါစမို့ရောကြောင့် သင်းသင်းမှာ မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားမိရသည်..။ အဲဒီမှာတင် သင်းသင်းတစ်ယောက် အိပ်မက်ဆိုးးတွေ မက်ပြီး ဘီလူးစီးတာ ခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်..။ သင်းသင်းအမေ ဒေါ်ပိန်သေး၏ နောက်ယောက်ျားဖြစ်သူ ဦးအုန်းကျော်သည် အရက်မှ လွဲ၍ မိန်းမ အပျော်အပါး ကင်းသူဖြစ်သည်..။
အရက်ကိုတောင်မှ တစ်ပါတ်တစ်ခါ နှစ်ခါသာ ပုံမှန်သောက်ဖြစ်သည်..။ သင်းသင်းကို
မယားပါ သမီးဆိုပေမယ့် သမီးအရင်းလို ချစ်သည်..။ ဒေါ်ပိန်သေးနှင့် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ချိန်တွင်ပင် ပထွေးနှင့် မယားပါသမီး တို့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်မည်ကို စိုးခဲ့သည်..။
သို့အတွက် ဒေါ်ပိန်သေးကို ရှင်းပြပြီး တစ်ဖက်လှည့်နှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ နှင်းနှင်းအေးတို့အိမ်တွင် အနေခိုင်းလိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်အနေဖြင့် ဒေါ်ပိန်သေးကို ရခါစဖြစ်သဖြင့် အချိန်မရွေး လိုးမည်ဖြစ်သောကြောင့် သမီးပျိုးလေးသင်းသင်းအတွက် မတင့်တယ်ကြောင်း ဦးအုန်းကျော် နားလည်နေ၍ အိမ်မှာ မနေဖြစ်အောင် စီစဉ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ ဒေါ်ပိန်သေးကို ရခါစက ဒေါ်ပိန်သေးမှာ အမည်နှင့် မလိုက်အောင်ပင် တောင့်တောင့်တင်းတင်း ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး ကြီး ဖြစ်သည်..။
သူနာပြုဆရာမလည်း ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ လူနာရှိလျင် ရှိသလို အိမ်တွင် နေရချိန် နည်းသည်..။ သည်တော့ ဦးအုန်းကျော်မှာ ရသည့်အချိန်မှာ ရသလို ဒေါ်ပိန်သေးကို လိုးရသည်..။
မနက် ၊ နေ့ခင်း ၊ ည ဟူ၍ အချိန်ရွေးမနေအားပဲ တွေ့သည့်အချိန် ရသည့် နေရာမှာ လိုးသည်..။ အိမ်ထဲ ၊ အိမ်ပြင် ၊ မီးဖိုချောင် ၊ အိပ်ခန်း ထဲ စသဖြင့် ရသရွေ့ အချိန်မဆိုင်းပဲ လိုးလေ့ရှိသည်..။ ဒေါ်ပိန်သေးကလည်း မယ်မငြင်းဆိုသည့် မိန်းမမျိုးထဲက ဖြစ်သည်..။
ဦးအုန်းကျော် ဘယ်နေရာ ၊ ဘယ်အချိန် လိုးလိုး ၊ လိုးသမျှကို အမြဲတမ်း အသင့်ခံတတ်သည်..။ လိုးမယ်ဆိုလျင် အဆင်သင့်ပြင်ပြီး ခံလိုက်သည်ချည်း ဖြစ်သည်..။ လီးနှင့် ကင်းကွာပြတ်တောက်နေခဲ့ရသည်မှာ ကြာခဲ့ပြီကောလေ…၊ ဦးအုန်းကျော်ကလည်း အလိုးကောင်းဆိုတော့ ဒေါ်ပိန်သေး စွဲမယ်ဆိုလည်း စွဲလောက်စရာပါပဲ…။ သမီးဖြစ်သူက တက္ကသိုလ် ဆက်တက်တော့ သင်းသင်းအိမ်မှာ မရှိလေ ပိုပြီးလွတ်လပ်လေ ဖြစ်ပြီး ပိုးလိုးဖြစ်ခဲ့ကြသည်..။
အဲ…သင်းသင်း ကျောင်းပြီး၍ အလုပ်စဝင်တော့ မြို့ကျောင်းမှာ ပဲ တာဝန်ကျသည့်အတွက် အိမ်ပြန်ရောက်လာသောကြောင့် ဦးအုန်းကျော်မှာ ဒေါ်ပိန်သေးကို အလိုးလျှော့ထားရလေသည်..။ ညအိပ်မှပဲ လိုးဖြစ်တော့သည်..။ အလိုးမလျှော့လို့ မဖြစ်သည့် အကြောင်းကလည်း ပေါ်လာသေးသည်..။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒေါ်ပိန်သေးတစ်ယောက် မီးယပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားလေသည်..။ တပိန်ပိန် တလိန်လိန်နှင့် ဖြစ်လာပြီးေ၇ာဂါကို သက်သာအောင်ပင် မနည်း ကုယူခဲ့ရသည်..။ လူနှင့် နာမည် အခုမှ လိုက်သွားရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ ဒေါ်ပိန်သေးကို အရင်ကလို စိတ်ရှိတိုင်း မလိုးနိုင်တော့ အာသာပြေရုံလေးလောက်သာ လိုးရတော့သည်..။
သင်းသင်းတစ်ယောက် နှင်းနှင်းအေးတို့ မြို့သို့ အလုပ်ပြောင်းသွားရချိန်မှာတောင် ခါတိုင်းလို အားရပါးရ မလိုးရတော့ စိတ်ကို အတော်ပင် ချုပ်တည်းကာနေခဲ့ရသည်…။
ခုလည်း အလှူက ကျောင်းမှာပဲ လုပ်ဖြစ်သဖြင့် ကိစ္စတွေ စီစဉ်ရန် ဒေါ်ပိန်သေးနှင့် ကျောင်းမှာ အတူလိုက်သွားဖြစ်သည်..။ အဲ…ကျောင်းမှာ ရောက်တော့ အလှူပွဲမှာ ထည့်ရမည့် အချိုပွဲကိစ္စ မှာကြားရန် ပေါ်လာသည်..။ အချိုပွဲမှာရန် ကိစ္စက မြို့စွန်ကို သွားရမည်ဖြစ်ရာ ဒေါ်ပိန်သေးတစ်ယောက်တည်း ဆိုက်ကားဖြင့် သွားလိုက်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်လည်း အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်..။ စိတ်ထဲ နည်းနည်း ပန်းသလိုရှိသဖြင့် အရက်တစ်ပိုင်း ဝင်ကစ်လာခဲ့မိသည်…။ အိမ်ကိုရောက်တော့ တံခါးပွင့်နေသဖြင့် သင်းသင်းရောက်နေပြီဆိုတာ တွက်ဆလိုက်သည်..။
အရက်သောက်လာခဲ့သဖြင့် ဆီးသွားချင်သောကြောင့် အိမ်အတွင်းဖက်မှ တဆင့် နောက်ဖေးသွားရန် လာခဲ့သည်..။ ဦးအုန်းကျော်တို့လင်မယား အိပ်သော အိပ်ခန်းနှင့် သင်းသင်း၏ အိပ်ခန်းမှာ ကပ်လျက် ဖြစ်သည်..။ သင်းသင်းအိပ်ခန်းပြီးလျင် မီးဖိုခန်း ၊ ထိုမှတဆင့် အိမ်သာ ရေချိုးခန်း ရှိသည်..။ အိမ်ထဲဝင်ဝင်ချင်း ဆီးသွားချင်တာကို အရင် သွားပြီး ဖြေရှင်းလိုက်သည်..။
အိမ်သာမှ ပြန်လာချိန်တွင် သင်းသင်း၏ အိပ်ခန်းတံခါး မစေ့တစေ့ဖြင့် ဟနေသည်ကို တွေ့ရသည်..။ ဘာရယ် မဟုတ် ၊ အိပ်ခန်းတံခါးကို စေ့ပေးရန် လုပ်ရင်း အမှတ်တမဲ့ အိပ်ခန်းထဲ လှမ်းကြည့်မိသည်..။ သင်းသင်းမှာ အိပ်မောကျနေပုံ ရသည်..။ အိပ်နေပုံကလည်း ကြည့်ပါအုံး..။ ဒူးတစ်ဖက်ထောင် တစ်ဖက်လှဲ ပုံစံမျိုးဖြင့် အိပ်ပျော်နေသည့်အတွက် ခြေသလုံးအထိ လန်တက်နေသော ထမီအောက်မှ ဖွေးဥသော ပေါင်သားဝင်းဝင်းကြီးတွေကို တွေ့ရသည်..။
ထမီက လက်တစ်ဝါးသာသာလောက် ဟနေသဖြင့် အထဲကို တိုးလျှိုးပေါက် ကြီးတော့ မမြင်ရချေ..။ အရက်တစ်ပိုင်း ကစ်လာခဲ့သည့်အရှိန်ကြောင့်လည်း ဦးအုန်းကျော် စိတ်ထဲ နည်းနည်း ရဲတင်းမိသည်..။ သင်းသင်း၏ မလုံမလဲ အိပ်နေပုံကို ကြည့်၍ စိတ်၇ိုင်းတို့ ကြွလာကာ သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ကြီးကို မြင်ချင်လာသည်..။
သူ့အမေ ဒေါ်ပိန်သေး၏ စောက်ပတ်လိုပဲလား ၊ ဘာကွာခြားသလဲ သိချင်လာသည်..။ ဒေါ်ပိန်သေးကလည်း မြို့အစွန်ထိအောင် သွားရမှာဆိုတော့ အချိန် ကောင်းကောင်းရသေးသည်..။ သင်းသင်းကလည်း ခရီးပန်းလာလို့ထင့်..၊ အိပ်မောကျနေရှာသည်..။
အိမ်မှာကလည်း သင်းသင်းနှင့် သူ နှစ်ယောက်တည်း ဆိုသော အသိကလည်း ဦးအုန်းကျော်၏ စိတ်ဆင်ရိုင်းကို ချွန်းအုပ်၍ မရတော့ချေ..။ သင်းသင်း အခန်းထဲဝင်ပြီး အထဲမှ တံခါးကို ချက်ထိုးပိတ်လိုက်သည်..။ သင်းသင်းအိပ်နေသော ကုတင်အနီးသို့ အသာ တိုးကပ်သွားလိုက်သည်..။
သင်းသင်း၏ ထောင်ထားသော ဘယ်ဖက်ပေါင်အထက်တွင် ထမီစက ဒေါင့်တန်းဆွဲ တင်းနေသည်မို့ ထမီစ နှစ်ခုကြားတွင် လက်တစ်ဝါးစာလောက် ဟနေသည်..။ လှဲချထားသော ခြေတစ်ဖက်ဆီမှနေ၍ တဆင့်ကြည့်လိုက်ရာ မဲနက်နေသော စောက်မွှေးနုနုလေးများပေါက်နေသည့်ဆီးခုံလေးကို ထင်ရှားစွာ တွေ့လိုက်ရသည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှာ တံတွေးကို လည်ချောင်းထဲ ဂလုခနဲ မြည်အောင် မျိုချလိုက်မိသည်..။ သင်းသင်းကို သမီးကဲ့သို့ သဘောထားခဲ့သောကြောင့် မသင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့ အသိကလည်း ဝင်လာသည်..။ မကြံကောင်းမစည်ကောင်းသည်ကို တွေးမိပြီး စိတ်မိုက်ကို ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားမိသည်..။ ကုတင်အနားမှ ပြန်၍ ခွာမည်ဟု ခြေလှမ်းပြင်သည်..။
ထိုစဉ်မှာပဲ သင်းသင်းက ကိုယ်ကို လူးလွန့်လိုက်ရာ လှဲချထားသော ခြေတစ်ဖက်ကို ထောင်လိုက်လေသည်..။ သည်တော့ ထမီက ပေါင်ရင်းအထိ လန်တက်သွားတော့သည်..။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းစလုံးမှာ ထောင်လျက်အနေအထား ဖြစ်သွားသဖြင့် ဝင်းစက်အိမွတ်သော ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးက ထင်းထင်းကြီး ပေါ်လာတော့သည်..။
ဖင်သားကြီးများကလည်း ဝင်းအိစွာ ပေါ်လာလေသည်..။ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာတော့ ရှုမငြီးနိုင်သည့် တောအုပ်မဲမဲလေးနှင့် တောင်ပူစာလေး က မြှူဆွယ်နေပေတော့သည်..။ စောက်မွှေးနုနုလေးများက ဆီးခုံပေါ်တွင် ထင်ရှားစွာ အုပ်မိုးလျက် စောက်ဖုတ်ကြီးက လက်လေးလုံးတင်းတင်းခန့် ဗျက်ကျယ်ပြီး အကွဲကြောင်းကြီးကလည်း နက်ရှိုင်းစွာ ချိုင့်ဝင်သွားပြီး နှုတ်ခမ်းသား ထူထူအမ်းအမ်းကြီးများကိုလည်း တွေ့လိုက်ရသည်..။ အပေါ်ဆီခုံအဆင်း အစပ်မှသည် အကွဲကြောင်းကြီးက ဖင်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်အောင် ရှည်လျားလှသည်..။
စေ့ကပ်တင်းကြပ်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို သူ့လီးကြီး ထိုးသွင်းပစ်လိုစိတ်တွေက သူ့လီးတန်ကြီးကို ပုဆိုးထဲတွင် မာတင်းထောင်မတ်လာစေတော့သည်..။ စိတ်ရိုင်းဒီရေက တရိပ်ရိပ် တက်လာသောကြောင့် ပြန်လှည့်မည့် ခြေလှမ်းများကလည်း မရွှေ့နိုင်တော့..။
“ အင်း….အင်း..ဟင်း ဟင်း…….”
သင်းသင်းမှာလည်း ဘာတွေ အိပ်မက် မက်နေသည်မသိ
လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ပေါင်ခြံကြားကို လှမ်းကုတ်လိုက်ရင်း
ထမီကို ခါးထက်သို့ ဆွဲတင်လိုက်ကာ ပေါင်ကြီးတွေ ကို
ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ချောင်း ခပ်ပြဲပြဲကြီး ကားဟသွားသဖြင့် သင်းသင်းစောက်ပတ်ကြီးက ရှိရင်းစွဲအ၇ွယ်အစားထက် ပို၍ ပြန့်ကားသွားသည်..။ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းထိပ်မှ စောက်စိကလည်း ပြူးတစ်တစ်လေး ဖြစ်နေသည်..။ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေး ဖြတ်ခနဲ ဟသွားရာ အတွင်းမှ နီရဲရဲ အသားနုလေးများကို မသိမသာလေး လှမ်းမြင်နေရသည်..။
ဦးအုန်းကျော် ကြည့်ရုံမျှနှင့် အားမရနိုင်တော့ချေ.။ ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ကာ ကွင်းလုံးပုံချလိုက်ကာ ကုတင်ပေါ်သို့ လှမ်းတက်လိုက်မိတော့သည်..။
သင်းသင်း၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ဒူးထောက်လိုက်ပြီး အပေါ်မှ မိုးခွကာ လက်ထောက်လိုက်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်၏ မာတင်းတောင့်ကာနေသော လီးတန်ကြီးက သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကြီးပေါ် မေးတင်လို့နေပြီ..။
စောက်ပတ်နံ့ကို ရလိုက်သော လီးတန်ကြီးက တဆတ်ဆတ်ဖြင့် သူဝင်ရမည့် လမ်းကို ရှာဖွေနေပါသည်..။ ဘယ်လက်ကို ထောက်မြဲအတိုင်း ထားပြီး ညာဖက်လက်ဖြင့် လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ စောက်ပတ်အဝကို တေ့ထောက်လိုက်သည်..။
သင်းသင်း၏ ပေါင်တန်ကြီးများက ဆတ်ခနဲ တွန့်သွားသည်..။ ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီး ထိပ်ဝမှ အရ
ည်ကြည်များ စီးထွက်ကျနေသော်လည်း သင်းသင်း ၏ စောက်ပတ်လေးမှာတော့ ခြောက်ကပ်နေသည်..။ လီးတန်ထိပ်မျက်နှာပြင်နှင့် သင်းသင်း၏ စောက်ပတ် အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် ပွတ်ဆွဲကြည့်လိုက်ရာ လီးကြီးမှ အရည်များက စောက်ပတ်မျက်နှာပြင်
တစ်ခုလုံး စိုရွှဲ ပြောင်လက်သွားစေသည်..။ အပျိုစောက်ပတ်လေး၏ နူးညံ့မှု အထိအတွေ့က ဦးအုန်းကျော်ကို မိန်းမောသွားစေသည်..။
ဦးအုန်းကျော် ဘာမှ မစဉ်းစားချင်တော့…၊ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပစေ မက်မောစရာကောင်းလွန်းလှသည့် ကာမအရသာကို ခံစားကြည့်လိုက်တော့မည်..ဟု စိတ်ထဲမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်အကွဲထဲသို့ ဖိသိပ်ထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်..။
ဟနေသော သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်အဝထဲသို့ လီးဒစ်ကြီး နစ်ဝင်သွားလေသည်..။ သင်းသင်းမှာ သူမ စောက်ပတ်ဝမှ ပူခနဲတင်းခနဲ ဖြစ်သွားရသဖြင့် ဘာဖြစ်လဲဟု လက်ဖြင့် လှမ်းပြီး စမ်းလိုက်သည်..။ ထိုအခါ အမွှေးကြမ်းကြမ်းကြီးများကို အရင်စမ်းမိပြီး မာတောင်နေသော လီးတန်ကြီးကို ကိုင်မိလိုက်သည်..။
ဘယ်သူလဲ ဆိုပြီး မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ
ဦးအုန်းကျော်၏ မျက်နှာကြီးကို မြင်လိုက်ရ၍ အော်လိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်း ပါးစပ်ကို လက်ဝါးတစ်ဖက်နှင့် ပိတ်လိုက်သည်..။ သင်းသင်းမှာ အော်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်ထဲ လီးဒစ်ကြီး ဝင်နေခြင်းကို လွတ်လိုလွတ်ညား အတင်းရုန်းကန်လိုက်သည်..။
သို့ပေမယ့် ရုန်းကန်လေလေ လီးတန်ကြီးက ဒစ်ဖျားတင်မက စောက်ပတ်အတွင်း သို့ နစ်ဝင်လေလေ ဖြစ်နေသည်..။
“ သမီးရယ်…..အဖေ ….မနေနိုင်လို့ပါ….
.သမီး စောက်ပတ်လေး က ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းလို့်ပါကွယ်…..”
ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်းကို ချော့မော့ပြီး ပြောပေမယ့်
ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မြှောက်ပြီး ကုတင်နှင့်
ဦးအုန်းကျော်၏ လက်မောင်းနှင့် ရင်ဘတ်များကို လည်း ထုရိုက်နေသည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ အခြေအနေ သိပ်မကောင်းမှန်း သိလိုက်သည်..။ သူ၏ လီးတန်ကြီးကလည်း အစက ဒစ်ဝင်ရုံလောက် သွင်းထားသော်လည်း သင်းသင်း၏ ရုန်းကန်တွန့်လိမ်မှုကြောင့် စောက်ပတ်ထဲ တဝက်လောက် ဝင်နေပြီ ဖြစ်သည်..။ အပျိုစစ်စစ်လေး၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးတန်ကြီး သွင်းလျက် လိုးရသည့် အခွင့်အရေးဆိုတာကလည်း ရနိုင်ခဲသည့် အခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်သည်..။ လီးတန်ကြီးက သင်းသင်းေ စာက်ပတ်ထဲ ဝင်နေသည့် အရသာက ချိုဆိမ့်နေအောင်လည်း ကောင်းနေသည် ဖြစ်သည်..။
ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးကို နောက်မဆုတ်စတမ်း
အရယူပြီး လိုးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။
.သမီး အော်လိုက်မယ် နော်…..”
သင်းသင်း၏ ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားသော လက်ကို ဖယ်လိုက်သည်နှင့်
ဦးအုန်းကျော် ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်တော့ချေ..။
သင်းသင်း၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲမပြီး ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်သည်..။
သင်းသင်း၏ လက်နှစ်ဖက် ကိုလက်ကောက်ဝတ်မှ
စုပြီး လက်တစ်ဖက်တည်းနှင့် ကိုင်လိုက်သည်..။
ခေါင်းအုံးဘေးတွင် တွေ့ရသည့် လက်ကိုင်ပုဝါစနှင့် သင်းသင်း၏ ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးထည့် ဆို့သိပ်လိုက်သည်..။ ပြီးမှ သင်းသင်း၏ လက်နှစ်ဖက်ကို စုကိုင်ထားရာမှ ခွဲထုတ်လိုက်ပြီး သင်းသင်းကိုယ်လုံးဘေးတွင် လက်များကို ဆန့်ချလျက် လက်ကောက်ဝတ်မှ နေ၍ လက်တစ်ဖက်စီဖြင့် ဖိကိုင်ထားလိုက်သည်..။ သင်းသင်းမှာ သူမ၏ ကိုယ်လုံးကိုသာ လှုပ်ရှားနိုင်တော့သည်..။
ကိုယ်လုံးကို လှုပ်တိုင်းလည်း လီးတန်ကြီးက မိမိစောက်ပတ်ထဲမှ ကျွတ်ထွက်မသွားသည့်အပြင် ပိုပြီး နစ်နစ်ဝင်သွားနေသဖြင့် မလှုပ်တော့ပဲ ငြိမ်နေလိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှာ သင်းသင်း ငြိမ်သွားသဖြင့် အကြိုက်တွေ့သွားရသည်..။
သင်းသင်း၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဦးအုန်းကျော်က ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်ထားသဖြင့် သင်းသင်း၏ ဖင်သားထွားထွားကြီးများမှာ ကုတင်ပေါ်မှ တစ်ထွာခန့် မြင့်တက်နေသည်..။
ဦးအုန်းကျော်က တဝက်ခန့် ဝင်နေသော လီးတန်ကြိးကို သင်းသင်း စောက်ပတ်လေးထဲ အဆုံးထိရောက်အောင် ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်..။ ပြီးလျင် လီးဒစ်ပေါ်အောင် ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး အဆုံးထိဝင်အောင် ပြန်ဆောင့်သွင်းသည်..။ သုံးလေးငါးချက် မျှ ဆောင့်လိုးလိုက်သောအခါတွင်မတော့ အပျိုမှေး ကွဲထွက်သဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသော သွေးများနှင့် စောက်ရည်ကြည်များက စောက်ခေါင်းအတွင်းရောထွေး ထွက်လာသည်..။ လီးတန်ကြီးကို ဆောင့်လိုးလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက် လုပ်ရတာလည်း ချောချောချူချူ ဖြစ်လာသည်..။ စောက်ပတ်နှင့် လိး အဝင်အထွက် ကြောင့် အသံများ ကလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်..။
သင်းသင်း၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည်ကြည်များကလည်း
အရမ်းထွက်လာပြီ ဖြစ်သည်..။ သွေးနှင့် စောက်ရည်ကြည်မျာ
း ရောနှောထွက်လာနေသော သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်လေးကို လိုးနေရသည့် အတွက်
ဦးအုန်းကျော်မှာ အရသာ ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်..။
သည်တော့ ဦးအုန်းကျော်၏ ဆောင့်လိုးချက်တွေက စိပ်စိပ်လာသည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ ပါးစပ်ကြိးကို ဟလျက် အရသာခံစားရင်း ခပ်စိပ်စိပ်လေး လိုးဆောင့်နေလေသည်..။ ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်မာမာကြီးဖြင့် တအား ဆောင့်လိုးသဖြင့် သင်းသင်းမှာ စောက်ပတ်ထဲတွင် ပထမပိုင်း နာကျင်မှု ဝေဒနာကို ခံစားရသည်..။ ပထွေးက မယားပါသမီးကို စော်ကားရက်လေခြင်း ဟူသော အသိကလည်း သင်းသင်း၏ ရင်ကို နာကျည်းချက်တို့ ဖြစ်ပေါ်စေသည်..။
ဒီအတွက် သင်းသင်း၏ ရင်ထဲမှ မခံရပ်နိုင်သဖြင့် မျက်ရည်များက ယိုစီးကျလာလေသည်..။ ပါးစပ်တွင် လက်ကိုင်ပုဝါကို ဆို့ထားလျက် ၊ လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လျက် ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်တင်ကာ မလှုပ်သာ မလွန့်သာအောင် ချုပ်ကိုင်ပြီး လိုးသဖြင့်လည်း ပထမပိုင်းတွင် နာကျင်မှုကို ကြိတ်မှိတ်ခံနေရသည်..။
သို့သော်လည်း သင်းသင်း ၏ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ ဦးအုန်းကျော်က ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း လီးတန်ကြီးက စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို ပွတ်တိုက်တိုးဝင်လာသည်..။ လီးတန်ကြီး တိုးဝင်လျင် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများက လိုက်ဝင်ပြီး လီးတန်ကြိး ဆွဲထုတ်လာလျင် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများက ကျွံထွက်လာသည်..။ သည်တော့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများသည် လီးတန်ကြီ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်လေတိုင်း ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ကောင်းမွန်သော အရသာကို ပေးလာကြောင်း သိလာရသည်..။ သဘာဝတရား၏ စေ့ဆော်မှုကြောင့်လည်း စောက်ပတ်ထဲ တိုးဝင်လာသော ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများနှင့် ညှစ်ပေးတတ်လာသည်..။
လီးတန်ကြီး ဝင်လိုက်သည်နှင့် အံကျဖြစ်အောင် လည်း ဖင်ကြီးကို ကော့တင်ပေးလိုက်မိသည်..။ အစပိုင်းတွင် သင်းသင်းမှာ ဦးအုန်းကျော်၏
လိုးဆောင့်မှုများကို မကြည်မသာ ၊ နာကျင်မှုဖြင့်
ခံနေရသမျှတို့က နောက်ပိုင်းတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော
ကာမအရသာကို ပေးမှန်း သိလာရသည်..။ ဦးအုန်းကျော်၏
အလိုးအဆောင့် အညှောင့်နှင့် လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်အောင်
စောက်ပတ်ကို ညှစ်ပေးရင်း ဖင်ကြီးကိုလည်း ကော့ကော့တင်ကာ ကာမအရသာကို သငိးသင်း ခံစားနေလေတော့သည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ အပျိုစစ်စစ်လေးဖြစ်သော သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်လေးကို အားရပါးရ လိုးနေရသဖြင့် တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသော ကာမအရသာကို ခံစားနေရလေသည်..။ ကာမအရသာကို ဆက်ပြီး ခံစားလိုသဖြင့် အဆက်မပြတ် ပင် ဆက်တိုက် ဆက်တိုက်လိုလို သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို တအားဆောင့်လိုးနေလေသည်..။
မကြာခင်မှာပင် ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီး ဆိမ့်ကျင်လာရပြီး ပူနွေးပျစ်ချွဲသော သုတ်ရည်များကို လီးတန်ကြီးထိပ်မှနေ၍ သင်းသင်း၏ စောက်ခေါင်းဝထဲသို့ အပြည့်အလျှံ ပန်းသွင်းလိုက်လေတော့သည်..။ သင်းသင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်လှသောကာမအရသာကို ခံစားလိုက်ရပြီး စောက်ခေါင်းထဲမှ သုတ်ရည်များကို ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီး ထိပ်ဆီသို့ ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်..။
သင်းသင်း၏ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ကိုင်ရိုက်ထားသလို ဖြစ်ကာ ဘာမှ လှုပ်ရှားချင်စိတ် မရှိတော့ပဲ အားကုန်သလို ဖြစ်သွားရလေသည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှာ လီးတန်ကြီးကို တပ်လျက်သား တန်းလန်းထားပြီး အပျိုစောက်ပတ်လေးထဲ လီးတန်ကြီး ထည့်ထားရသော ထူးခြားသည့် ကာမအရသာကို ခံစားနေလိုက်သည်..။ သင်းသင်းကို သတိရ၍ ကြည့်လိုက်ရာ သင်းသင်းအနေဖြင့် ဘာကိုမှ လှုပ်ရှားမှု မရှိတော့သည်ကို တွေ့လိုက်ရ၍ လက်ဖြင့် ကိုင်ထားသော သင်းသင်း၏ လက်ကောက်ဝတ်များကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်..။
ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်ထားသော ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုလည်း ခုတင်ပေါ်သို့ အသာအယာ ချပေးလိုက်သည်..။ ပါးစပ်ထဲ သွင်းဆို့ထားသော ပုဝါစကိုလည်း ထုတ်ပေးလိုက်သည်..။ သင်းသင်း၏ ကိုယ်ပေါ်ကို လီးတန်ကြီး တပ်လျက် တန်းလန်းဖြင့် မှောက်လိုက်ပြီး သင်းသင်း၏ နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို သူ၏ နှုတ်ခမ်းသားများဖြင့် ဖိကပ်ပြီး နမ်းစုတ်လိုက်သည်..။
သင်းသင်း၏ ရင်ဘတ်ပေါ်မှ သူ၏ ကိုယ်ကို အပေါ်သို့ ကုန်းကုန်းလေး လုပ်လျက် ခွာလိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သင်းသင်း၏ နို့အုံနှစ်လုံးကို အင်္ကျီပေါ်မှ နယ်ဖတ်ဆုပ်ကိုင်ပေးလိုက်သည်..။ သင်းသင်း၏ တဒင်္ဂ ငြိမ်သက်သွားသော ကာမဆန္ဒတွေက တဖြည်းဖြည်း နိုးထလာပြီဖြစ်သည်..။
မိမိ စောက်ပတ်ထဲ အကြားအလပ် မရှိ ထိတွေ့နေသဖြင့် လည်း စောက်ခေါင်းထဲမှာ ယားယံလာပြန်ပြီ ဖြစ်သည်..။ မိမိ၏ နို့အုံများကို လက်များဖြင့် ချေမွှပေးနေပြန်သဖြင့်လည်း တစ်ကိုယ်လုံး ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း နှင့် ကြက်သီးများ ထနေရသည်..။ နှုတ်ခမ်းများကို နမ်းစုပ်နေသော ဦးအုန်းကျော်၏ နှုတ်ခမ်းများကို သင်းသင်းက မျက်နှာဘေးစောင်းလျက် ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်..။
“ အင်း……ဟင့်ဟင့်…….အဖေ မကောင်းဘူး…..ဟင့်ဟင့်…….”
သင်းသင်းက ငိုရှိုက်လျက် ဖွင့်ထုတ်လိုက်သည်..။
သင်းသင်း၏ ကိုယ်ခန္ဓာလေးမှာ ရှိုက်၍ ရှိုက်၍ ငိုနေသောကြောင့် လှုပ်ခါရမ်းနေသည်..။
အခုလို ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် သည်လိုသည်အချိန်တွင်
အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်သွားပါက ဦးအုန်းကျော်လည်း မကောင်း ၊
အမေ ဒေါ်ပိန်သေးလည်း မကောင်း ၊
မိမိ၏ ဆရာမ ဆိုသော ဂုဏ်သိက္ခာကလည်း ကျသွားနိုင်သည့်အ ရေးဖြစ်သဖြင့်
သင်းသင်း မှာ အသာပင် ငြိမ်နေလိုက်ရသည်..။
ဘာမှ မတတ်နိုင်သော ကိစ္စ ဖြစ်သဖြင့် လည်း အဖေ …မကောင်းဘူး ဟူ၍သာ
သင်းသင်း၏ မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်များက စီးကျလာလျက် ရှိသည်..။
သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲတွင် တပ်လျက်တန်းလန်းကြီး ဖြစ်နေသဖြင့်
သင်းသင်းမှာ အလိုမကျ ဝမ်းနည်းမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေရာမှ
လီးတန်ကြီးကို ထိနေသော စောက်ခေါင်းထဲတွင်
ယားကျိကျိ ပြန်ဖြစ်လာသည်..။ ဦးအုန်းကျော်က လက်များဖြင့်
သင်းသင်း၏ နို့အုံနှစ်လုံးကို ဆုပ်နယ်ပေးသည်..။ နို့သီးခေါင်းကလေးကို လည်း ချေပေးသည်..။ အင်္ကျီပေါ်မှ ကိုင်ဆုပ်နယ်ပေးတာ ဖြစ်ပေမယ့် သင်းသင်းအဖို့ အခံရခက်လာသည်..။
ဦးအုန်းကျော်က မျက်ရည်စီးကြောင်းများဖြင့် ပေနေသော သင်းသင်း၏ ပါးပြင်ကို အသာနမ်းရှုံ့ပြီး သင်းသင်း၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို သူ၏ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးဖြင့် နမ်းစုပ်လိုက်ပြန်သည်..။
ဒီတစ်ခါတွင်မတော့ သင်းသင်းမှာ လွှဲဖယ်ခြင်း မပြုတော့ပဲ စိတ်လိုလက်ရ ပြန်လည် နမ်းစုပ်မိသည်..။ ဦးအုန်းကျော်က နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ရာမှ သူ၏ လျှာဖျားလေးကို ထုတ်လျက် သင်းသင်း၏ နှုတ်ခမ်းများကို ပွတ်သပ်ပေးသည်..။
သင်းသင်း၏ နှုတ်ခမ်းသားများကို ဖြတ်ကျော်လျက် သင်းသင်း၏ ပါးစပ်ထဲသို့ လျှာကို ထိုးသွင်းကာ သင်းသင်း၏ လျှာလေးကို ပွတ်တိုက်ထိတွေ့လိုက်သည်.။ သင်းသင်းမှာ လည်း မိမိ၏ လျှာဖျားလေးဖြင့် ဦးအုန်းကျော်၏ လျှာဖျားကလေးကို ထိ၍ ရစ်ပတ် လှုပ်ရှားပေးနေမိသည်..။
သင်းသင်းလည်း ဘာသားနှင့် ထုထားတာ မှတ်လို့လဲ..၊ သွေးသားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့် ကာမအရသာကို ချိုဆိမ့်သည်ဟု ခံစားနေမိလေပြီ…။
မိမိ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးသွင်းထားသော ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲမှ အတွင်းသားများဖြင့် ပွစိပွစိဖြင့် ညှစ်ကစားပေးနေမိသည်..။
ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကလည်း ပြန်လည် မာတောင်လာပြီ ဖြစ်သည်…။ အပျိုမလေး ဖြစ်သော သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ကလေးမှာ သူ၏ လီးတန်ကြီးကို မာတောင်လာအောင် လိုးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ရစ်ပတ်နွယ်နေပြီ ဖြစ်သည်..။ နှုတ်ခမ်းကို စုတ်နမ်းလျက် မိမိ၏နို့များကို ကိုင်တွယ်ဆုပ်နယ်ကာ သူမအပေါ် မှောက်နေသော ဦးအုန်းကျော်ကို သင်းသင်း က လက်များဖြင့် ဖက်တွယ်လိုက်သည်..။ သင်းသင်းအနေဖြင့် ကာမဆန္ဒစိတ်တွေ ထကြွလာပြီဆိုတာကို သိသော ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်း၏ ဒူးနှစ်ချောင်းကို ထောင်လျက် ခြေထောက်များကို မိမိပေါင်ပေါ်သို့ ချိတ်တင်ပေးလိုက်သည်.။ ထိုအခါ စိနေသော သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်လေးမှာ ပြဲသွားသဖြင့် လီးတန်ကြီးကို ညှစ်ထားသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများ နည်းနည်း ကွာသွားသည်ကို ဦးအုန်းကျော် သိလိုက်ရသည်..။
အဆုံးထိ သွင်းထားသော လီးတန်ကြီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပြွတ်ခနဲ ပြန်ထိုးသွင်းလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ မရပ်တော့ပဲ အားရပါးရကြီး ကို လိုးညှောင့်နေလေတော့သည်..။
ဦးအုန်းကျော်က လက်ကြီးများဖြင့် သင်းသင်း၏ နို့အုံကြီးများကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည်..။ လိးတန်ကြီးက မာမာလာပြီး စောက်ပတ်ထဲသို့ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေလေသည်..။
Latest Version Download Drbikalay.apk
ဒီစော်ရဲ့ ကားလေးကြည့်ကြမလား ? Coming Soon!
ကြိုက်တဲ့ အိုးကို ခွဲသွားကြ
Myanmarကား သီးသန့် အသစ် 40 ကား ဒေါင်းလိုက်ပါ
Myanmarကား သီးသန့် အသစ် 12 ကား Download
Myanmarကား သီးသန့် အသစ် 40ကား Download
မိန်းမ အိပ်နေတုန်း ခိုးရိုက်ထားတာတဲ့
Myanmar ကားအသစ်တွေ 35 Movies Download
Myanmar ကားအသစ်တွေ ၇၀ ကျော် Download
ဘုတ်ဆုံမကို တစောင်းလေးဆွဲလိုက်တယ် Myanmar BBW
အပေးကောင်းတဲ့ မဘုတ်ဆုံ Myanmar BBW
နောက်တစ်ယောက် ဘုတ်ဆုံမ ကိုယ်တိုင်ရိုက် Myanmar
သူများတွေ ပြမယ်တဲ့ Myanmar ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပါ
စော်လေးတော်တော်ကောင်းနေပုံ ကိုယ်တိုင်ရိုက် Myanmar...
၄၀ ကျော် Myanmar ဘုတ်ဆုံမ
အိမ်တွင်းဖြစ် ကိုယ်တိုင်ရိုက်လေး Myanmar
Myanmar စစ်စစ် ကိုယ်တိုင်ရိုက် HD
အိုးတွေ ကြိုက်လား? Photos
ကိုကိုက ချုံထဲမှာ ဟွာပြုပီး ချွေးလေးတွေ သုတ်ပေးနေတ...
Myanmar ကားများ သီးသန့်
ပန်းသေလား မသေလား နင်ကဘယ်လိုသိတာလဲ ?
Online တတ်တာ အားလို့မဟုတ်ဘူး စာများများဖတ်ဆိုလို့ ...
Myanmar Movies သီးသန့် 40 Movies - 10
Myanmar Movies သီးသန့်7Movies -9
Myanmar Movies သီးသန့် 100 Movies -8
Myanmar Movies သီးသန့် 100 Movies -7
Myanmar Movies သီးသန့် 100 Movies -6
Myanmar Movies သီးသန့် 100 Movies -5
Myanmar Movies သီးသန့် 100 Movies -4
Myanmar Movies သီးသန့် 100 Movies -3
Myanmar Movies သီးသန့် 100 Movies -2
Myanmar Movies သီးသန့် 100 Movies -1
မြန်မာ Movies 6000 ကျော် ရှိပါတယ် ဒေါင်းထားကြပါ ။...
အိမ်သာခန်းထဲမှာ ဆွဲမယ် Myanmar
အပြုအစု အရမ်းတော်တဲ့ စော်လေး Myanmar
Myanmar အိမ်တွင်းဖြစ် ချောင်းရိုက်လေး
Myanmar Movies သီးသန့် 31 Movies
အပေးကောင်းတဲ့ Myanmar BBW
စော်ကို ဂျာပေးတဲ့ ကိုဂျာကြီး Myanmar Oral Sex
စော် ၂ ယောက်ကို Hotel မှာ ခေါ်ဆွဲတဲ့ ဘဲကြီး Myanmar...
ဟာအကို.. မလုပ်ရတာကြာလို့ အရမ်းကောင်းတာပဲတဲ့ Myanm...
အပေးကောင်းတဲ့ စော်လေး Myanmar Doggy Style
အောက်ကနေ စောင့်မယ်ဆွဲမယ် Myanmar Outdoor Sex
သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး စော်တစ်ပွေ ခေါ်ဆွဲလိုက်တယ် Mya...
Myanmar Movies သီးသန့် 40 Movies -10
Download Myanmar Movies အသစ်တွေ 95 Movies
Download Myanmar Movies အသစ်တွေ 50 Movies
Download Myanmar Movies အသစ်တွေ 100 Movies
Myanmar Movies အသစ်တွေ 59 Movies
Myanmar Doggy Style လေး
Myanmar 69 at Hotel
Myanmar Pussy လေး
Download Myanmar Movies အသစ်တွေ 180 Movies
Download Myanmar Movies အသစ်တွေ 115 Movies
"အဒေါ်မယား " Book
မြန်မာ Doggy Style လေး
*** ခံချင်လွန်းလို့*** Book
ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာ ရင်ဘတ်တစ်ဖက် ပေါ်သွားတဲ့ ဗီဒီယု...
Myanmar Pussy များ
မလိုးခင် ရိုက်ထားတာလေး Myanmar
ှရွှေ ရွှေ ကားကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက အားပေးနေတဲ့...
လင်က အချစ် လီးက အနှစ်
ကိုယ့်ရဲ့အကြည့်အောက်မှာမင်းကျရှုံးပါစေကွာ ဆိုတဲ့ M...
အမှုတ်ကောင်းတဲ့ မမ Myanmar
မြန်မာ စစ်စစ်လေး Homemade
ဖျက်ဖောက်ချုပ် လုပ်မယ်လို့ တဲ့ (Myanmar Ladyboy)
အရင်ယောက်ျားနဲ့ အခုယောက်ျား လိုးတာ ဘယ်ဟာကောင်းတာလဲ...